トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Nepachinko mienzaniso kusarudza mukurwa manyorerwo uye Specs
The nepachinko Machine, pane chinhu inonzi spec. Spec uye ari Numeric ukoshi kuti unomirira mukana yacho jackpot. Nepachinko of nokurondedzerwa, achaiswa Classified kupinda marudzi mikuru mitatu. On the mhando jackpot mukana anonzi mumwe kana kupfuura mukuru-spec zvizere spec kwemaminitsi 360, mutsa akadana maminitsi 300 1 vasati uye pashure yapakati mhando spec chiedza middleweight, kuguma usati uye pashure 1 100 maminitsi Amadeji kana Dejihane-Yu Pachi kufona ndianiko zvakasiyana siyana, asi zvinonzi Classified nehasha muzvikamu zvitatu marudzi. The yakakura uwandu
mukana, usingatangi rova ??chaizvo, zvichava kuti zvakaoma rova.
pakati-siyana nokurondedzerwa, ishanduro kufunga takunda womuenzaniso. Achitaura hwina wokuenzanisira, achiri pane bhomba simba payout achava ndechokuti kukurukurirana Chan nyore zvinoedza. Saka, pane nyaya kuti unoda chaizvo kuhwina, Chokwadi mukuru-spec inokurudzirwa. Mukana kumusoro miniti, asi ndiye anosakadza, nokuti putika simba zvava kupfuura dzimwe Specs, ndiwane mukana achava akakwirira kupfuura spec.
Zvisinei, mukuru-ngozi, nokuti mukuru kudzoka, kana chinangwa chiri kunze, uyewo inoda zvayo nzira pachedu inivhesitimendi. Mukuwedzera, muna muenzaniso akadana ichangopfuura Kazhinji kurwisana mhando, yokutevedzera vane mukurumbira, iwe kazhinji inova kunyange mukana yakawanda mukuru-spec uye pakati mhando Specs. Kuti akunde, asi kune pamwero aidawo kugadzirira kuti mari, tinotarisira pachikuva kusarudza, unogona kunzwisisa kunyange zvishoma Dalian Chang inivhesitimendi.
Uyezve, ndinoda kuhwina, kana kuti zvikuru guru mutambo uchida kuenda mumwe uye nguva kunoita kuti kunorwadza, zvakanaka uye kusarudza pakati Specs. Uye pezvokuvamba okunze uye kutamba kuhwina, chete zvakanaka kunakidzwa, ndichazvirumbidza spec ichi. Mumakore achangopfuura, izvozvo akabuda dzimwe yokutevedzera, yainzi ST michina, panewo mhando kuti vanakidzwe zvimwe mwero mafaro.
Uyezve, unogona kutarisira kuramba Chang. Uye, avo vanofunga kuti Handizivi Ndinofanira kana kuhwina zvishoma uye kutamba mujenya, Dejihane inokurudzirwa. One Nguva payout kushoma, asi kuva imomo bhora kubva zvakakwana Zvinoshamisa kana kutaura Chang. Investment mari ndiwo runako Specs pane chinhu chingava chiduku.
Nenzira iyi, kunyange categorically vanoti takunda wokuenzanisira kusarudza, pane zvaunoda kuti sei kuwana mhando, muenzaniso vasanangurwa vachange zvachinja yekudyidzana. Zvingani unoda kuwana, uyewo acharamba tinzwe nekuti zvakadini hwokushanda kana nguva kutora.
Chokwadi, pasi jackpot mukana, nokuti nyaya yakakwirira nevazukuru mutambo wenyika muenzaniso zvaizotora nguva kuti kumisa mukana, panewo chokwadi ichapedza bedzi kufufutirwa zvachose, akadai vashandi hofisi pashure basa iri . The womuenzaniso muduku (Chokwadi, panewo Zvinobvira here kuhwina makuru kudzokorora mazuva mazhinji, pakupedzisira ... anogona sei wekuita mu)
mari pangozi, simba putika simba payout, iyo mari mari, mhando kuti pangangova kuva mazhinji, nokuda putika nesimba payout, ndechokuti mumwe-bara chaisazvitsigira. Kana kuti Specs handizivi zvakanaka, saka isu akanyorwa muudzame mumagazini zvakadaro zvino, tisati taenda kutamba, zvingava zvakanaka here kuverenga murayiro bhuku. Models kuti pangangova kuva mazhinji, nokuda putika nesimba payout, ndechokuti mumwe-bara chaisazvitsigira. Kana kuti Specs handizivi zvakanaka, saka isu akanyorwa muudzame mumagazini zvakadaro zvino, tisati taenda kutamba, zvingava zvakanaka here kuverenga murayiro bhuku. Models kuti pangangova kuva mazhinji, nokuda putika nesimba payout, ndechokuti mumwe-bara chaisazvitsigira. Kana kuti Specs handizivi zvakanaka, saka isu akanyorwa muudzame mumagazini zvakadaro zvino, tisati taenda kutamba, zvingava zvakanaka here kuverenga murayiro bhuku.